Fampihorohoroana: nisy nitoraka grenady ny tranon-dRaholdina Naivo | NewsMada
Asa fampihorohoroana ! Nisy nitoraka tamin’ny grenady ny tranon’ny depiote Raholdina Naivo, ny zoma lasa teo, tokony ho tamin’ny 9 ora alina, teny Ambohidahy Ankadindramamy. Nirefotra teo amin’ny rindrina ilay grenady raha saika hatoraka any anaty trano mihitsy. Tsy nisy naninona ireo fianakavian’ingahy depiote avy amin’ny mapar. Na izany aza, niteraka tahotra ho azy ireo, na ny olona teny amin’ny manodidina aza ny hamafin’ny fipoahana. Naheno azy io daholo mantsy hatrany Ampasampito sns.
Ankoatra ity grenady teny Ambohidahy Ankadindramamy ity koa, nahenoana zavatra nipoaka mafy teny Mahamasina. Fantatra fa zavatra tao amin’ny toerana misy mpanakanto iray izy io. Tsy grenady kosa anefa fa na izany aza, nanaitra ny olona teny amin’ny manodidina ny fipoahana. Nifanandrify tamin’io ihany koa anefa ilay zava-nitranga teny amin’ny tranon-dRaholdina.
Tonga teny an-toerana ny polisin’ny BC sy ny avy ao amin’ny boriborintany fahatelo nizaha ny zava-nisy. Mandeha ny famotorana manodidina ity toraka grenady ity. Misy avy hatrany ny fitoriana olona tsy fantatra amin’ny trangan-javatra tahaka izao.
Mandeha avy hatrany ny resaky ny olona fa misy ambadika politika ny toe-javatra. Anatin’ny hafanana politika tanteraka isika ary iray andro mialoha ny namoahan’ny Ceni ny vokam-pifidianana vonjimaika ny tranga. Mifamahofaho eo ny raharaha. Misy mikendry hanakorontana eto amin’ny firenena? Efa nanao fampitandremana ihany ny Emmo/Nat amin’izay mikasa hanao izany, ka andrasana ny fanadihadian’izy ireo.